Qindaa'inoota jijjiiramoota galmeeffaman agarsiisuuf qindeessa. Gosa jijjiiramaa qabduulee raadiyoo, amala gita argii fi halluun filadhu. Badheen durargii bu'aa dirqaalaalee argii filataman agarsiisa.
Saagaalee / Amaloota
Balleessaa / Amaloota
Amaloota jijjiiraman / Amaloota
Sararoota barruu kamtu akka jijjiiraman agarsiisuuf,mallattoo mudana bitaa yookiin mirgaa keessatti mul'atu qindeessuu dandeessa.
Title is: Jijjiirraa